तालिबानको असर नेपालमा कस्तो पर्ला ? यसरि अफगानिस्तान 1 महिमा तालिवानकाे कब्जामा लिन सफल भयाे (जानकारीका लागि सेयर गराै) - Public 24Khabar
Home International तालिबानको असर नेपालमा कस्तो पर्ला ? यसरि अफगानिस्तान 1 महिमा तालिवानकाे कब्जामा...
तालिबानको असर नेपालमा कस्तो पर्ला ? यसरि अफगानिस्तान 1 महिमा तालिवानकाे कब्जामा लिन सफल भयाे (जानकारीका लागि सेयर गराै)
नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना लगभग उस्तै समयमा भएको थियो। २००६ चैत २७ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकता भई नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो भने २००६ वैशाख १० मा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो।
सैद्धान्तिक रूपमा मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँ हुने भएपनि नेतृत्व र जुँघाको लडाइँले दर्जनौं हाँगाबिगामा विभाजित छ। पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा पनि नेतृत्वकै विवादका कारण दुई पटक ठूलो विभाजनको शिकार हुनुपर्‍यो।
रोचक पक्ष त के छ भने कांग्रेस सत्तामै भएका पार्टी विभाजन भएको थियो। विभाजनकै कारण ‘मधेस मुद्दा’ स्थापित गर्न भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको सद्भावना पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिबाटै ‘लोप’ हुन थालिसक्यो।
त्यसपछि गठन भएका तमलोपा र फोरमबीच टुटफुटका दर्जनौंश्रृंखला चले। माओवादी पार्टी पनि टुटफुटकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिदै गएको छ।
Previous articleहे दैव ! के जन्म दियौ नि यस्तो, टिकटकमा भाइरल यी साना बाबुलाई के भयो (हेर्नुस् भिडियो)
Next articleइकुको आश्रममा हरिबिजोक ,रुदै भन्छन् म म रे पनि मेरो छोराछोरीले खान पाउन ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) सके सहयोग नसके सेयर गराै